Date My Pet » Ahoana no To Raiso ny Dingana Voalohany Amin'ny Online Dating
Ianao naka ny mandroboka, ary vonona ny hanomboka mitady manan-danja amin'ny aterineto hafa. Tena mampientam-po, nefa mampatahotra traikefa. Tampoka teo aminareo manana fahafahana mahita, ary mifandray amin'ny hafa mpitovo, noho ianao Nihaona isan-taona! Fa miandry tserasera mampiaraka dia tsy toy ny fivoriana na inona na inona ny olona amin'ny olona, ​​ary izany tokoa no tsy ho tonga amin'ny fitsipika boky ...
Hahatakatra ny Vocab: Ny iray amin'ireo voalohany sy mampikorontan-tsaina indrindra dingana no miatrika ny lingo. Io no fotoana voalohany fifandraisana, inona no fahatsapana no tianao ny hiala sy ny eo amin'izao tontolo izao no misafidy izay tokony hatao?
Toy ny tany amin'ny "tena fiainana" ny teny ampiasaintsika dia ny atao hoe karazana fifandraisana, toy ny tanany, hampisambotra ny tenany mba hanazavana ny zavatra nitranga vao roa ny olona. Izany hevitra izany mbola mihatra ny safidy an-tserasera:
Toy ny - Eritrereto izany ho toy ny tsiky manerana avy amin'ny fisotroana. Mety hihazona ny sain'ny olona iray. Na izany aza, fa tsy toy ny manao toy ny hoe nita ka nanao hoe:, "Salama."
Wink Wink i Paoly ka dia nandefa haingana toy araka ny voaroaka.
Favorite - Izao no olona izay niresaka ny amin'ny tsipika amin'ny Starbucks. Nahatsapa ny sombin ianao avy hatrany; eny ianao nifanena tamin'ny azy ireo amin'ny mandalo, fa tsy afaka miandry ny bump ho azy ireo indray.
Hafatra - Izany no SMS amin'ny "ilay" olona izay efa niandry hihaino avy ny andro. Ry zareo tanteraka ho anao.
Ny fanaovana ny safidy momba ny fomba hifandraisana afaka mamaritra ny karazana fanehoan-kevitra azonao.
Taitra sy velively mampitolagaga: Raha toa ka mila mamaky ny mombamomba vitsivitsy alohan'ny fanoratana ny anao, fa maninona.
– Sarotra ny mahalala izay ho aiditra ao amin'ny mombamomba azy sy ny tena raha vaovao ianao amin'ny aterineto mampiaraka. Tsy te-hanoratra ny Haiku, fa tsy tianao ny olona niteraka ranomaso amin'ny antsipirihany ny kilasy faha-5 pianô fitanisana.
– Ataovy azo antoka ny manome tsipiriany manokana, misy ny arivo olona tia ny filma sy 'te-hahita ny mpiara-miasa amin'ny asan-jiolahy,'Inona no tena samy hafa momba anao? (No nalehanareo ny mofomamy sekoly ary ankehitriny miasa amin'ny barotra. Angamba, ianao vao haingana naka parasailing?)
– Mamaritra ny zavatra tadiavinao amin'ny mpiara-miasa, raha tsy ny olona mety hieritreritra ny mombamomba dia sandoka.
Ho sahy: Efa nanatevin-daharana an-tserasera tsy mampiaraka ho wallflower, te-hahita olona!
– Ianao na inona na inona ho very! Inona avy ireo vintana anao no hihazakazaka ho amin'izany olona? Zero ho tsy misy; tsy tokony handefitra amin'ny azy ireo, raha tena te hafatra.
– Aza avela handresy fisalasalana ny anatiny. Ianao tsy fantatrao izay mety ho liana ao aminareo, raha tsy manome azy ho try. Ianao tsy anjara-tserasera mampiaraka ny mipetraka eo amin'ny zorony sy ny raiki-pitia no anao? Raha nanao, Mino aho fa diso ireo dia eo amin'ny tranonkala.
Andramo zava-baovao: Tsy misy maha ratsy ny mahafantatra "ny karazana,"Fa manandrana miresaka amin'ny olona iray izay dia tsy mitovy amin'ny taloha ny fifandraisana.
Rehefa manana safidy an'arivony mijery anao avy amin'ny mamirapiratra ordinatera, tsy misy na inona na inona ratsy ny mizaha toetra ny rano mba hianatra ny zavatra tianao. Angamba, ianao eo amin'ny daty amin'ny mpanao hatsikana sy ny saina, "Fotsiny aho afaka ny tsy ho amin'ny olona izay honks ny orony ho velona." Tsy misy na inona na inona ratsy an'izany, na angamba nianaranao izany izay efa niandry teny ampandehanana. Ianao tsy fantatrao izay mety hitranga.
Mijanòna Ho Ianao Ihany: Araka ny Dr. Seuss mametraka azy, "Izaho no hoe iza aho ary izany no zavatra lehibe ho." Raha Dr. Seuss nilaza izany, Tsy maintsy ho marina. Sarotra ny hanomboka ny fifandraisana amin'ny olona iray ianao, raha miezaka mody ho olon-kafa.
Eny "hottie8675309" dia tena mahasarika, nefa tsy afaka mahita na inona na inona ny mombamomba azy ianao amin'ny iombonana. Ny hevitrao ny tenanao, "Ary izy ireo antsoina hoe 'Ny voaloboka ny fahatezerana ' ho toy ny toerana tena boky. Heveriko namaky aho fa tany amin'ny lise. "Tsy fantatrao izany ianao amin'ny daty amin'ny olona izay nanoratra ny PhD dissertation amin'ny 'Ny voaloboka tezitra loatra izy. ' Mirary soa amin'ny izay!